Guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo soo saaray Habraaca shirka Dhuusamareeb. | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo soo saaray Habraaca shirka Dhuusamareeb.
Guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo soo saaray Habraaca shirka Dhuusamareeb.
Guddiga qaban qaabada Shirka dib u heshisiinta Beelaha Galmudug oo ku sugan Dhuusamareeb waxaa ay soo saareen habraaca qabsoomida Shirkaas.
Xubnaha Guddiga ayaa sheegay in ay wadaan diyaarga guda gelista shirka oo ay kamid yihiin, Soo dhaweynta Odoyaasha Ergada Beelaha ah, Wufuudda kala duwan ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Galmudug.
Guddiga ayaa soo saaray Shan qodob oo uu ku furmo karo shirka dib u heshiisiinta Beelaha Galmudug ee Dhuusamareeb lagu qabanayo 17 ka Bishaan, maadaama 5-tii bishaan dib loo dhigay, kadib markii Xubnaha guddiga ay sheegeen in Tacsidii Duqii Muqdisho iyo Todobaadka Ciidda ay isku xigsadeen.
Qodobada ay soo saareen waxaa kamid ah:-
1-Bilawga soo dhaweynta iyo Qaabilaadda Ergooyinka ka qeyb-galayaasha Shirka.
2-Hubinta iyo Kormeeridda Goobaha Shirka iyo Deegaanka Ergooyinka.
3-Diyaarinta Ajandaha iyo Agabyada Shirka.
4-War-gelinta iyo Diyaar-garowga Hay’adaha Amniga iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka.
5-Xadeynta Waqtiga soo gaaridda Ergooyinka Goobta Shirka oo ah: 14-ka bishaan oo berri ah ilaa 16-Bishaan oo ah maalin kahor waqtiga shirka uu furmayo.
Shirkaan ayaa sidoo kale hagad u galay, gogol ay dhigteen Odoyaal dhaqameed mid kamid ah Beelaha Galmudug Magaalada Hobyo, iyagoona sheegay in aysan Dhuusamareeb tagi doonin ilaa inta shirkooda uu dhamaanayo.
Previous articleKuuriyada Koofureed oo Markab dagaal usoo direysa Biyaha Soomaaliya.
Next articleAMISOM oo laga dalbaday in ay buuxiyaan jagooyinka rayidka ee ka banaan.
R/wasaare Kheyre oo Safar deg deg ah ku tagay Magaalada Baydhabo,...
Magalada baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay waxaa gaaray Wafdi uu hogaaminayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre. Wafdiga waxaa Garoonka diyaaraha ku soo...